रमेश प्रसाई र नन्दाको बिबाहमा बिबाद किन आयो ? रमेश आक्रोशित हुँदा कुमारले गरे सबैलाई यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
रमेश प्रसाई र नन्दाको बिबाहमा बिबाद किन आयो ? रमेश आक्रोशित हुँदा कुमारले गरे सबैलाई यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki December 3, 2020
झापा । सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बहुमुखी प्रतिभाका धनि स्पष्ट वक्ता रमेश प्रसाई विवाह बन्धनमा बाधिन लागेका छन् । उनले कालिकोटकी नन्दासिंहसँग लगनगाठो कस्न लागेका हुन् । उनका सहयागी साथी जीवन विष्टले सामाजिक सञ्जालमा बिहेको कार्ड पोष्ट गर्दै आफू र रमेशले यही मंसिर २२ गते सोमबार विवाह बन्धनमा बाधिन लागेका जानकारी गराएका हुन् । सायद रमेशलाई नचिन्ने त कम होलान् तर उनको जीवनी संगिनी बन्न लागेकी नन्दा को हुन् भन्ने कुराले सबैमा उत्सुकता जगाएको छ ।
स्पष्ट वक्ता रमेश प्रसाई अहिले बिबाहको तयारी गरिरहेका छन् । रमेश प्रसाईको जस्तै उनको पनि धेरै संघर्षको कथा रहेको छ। उनकी जिबन संगिनी नन्दाको र गायिका कल्पना दाहाल बीचमा अहिले धेरै दर्शकले चासो देखाएपछि रमेश प्रसाईले स्पस्ट रुपमा कल्पना संगको सम्बन्ध बारे बताएका छन् । कल्पना संगको सम्बन्ध के थियो ? तल भिडियोमा रमेश प्रसाई संग नजिक रहेका अर्का समाजसेवी कुमार राइले यो बिषयमा स्पस्ट जानकारी प्रस्तुत गरेका छन् ।